Plasma 5.2 dị, ka anyị hụ ihe dị ọhụụ [Emelitere] | Site na Linux
Ya anyị nọ n'ọgbọ ọhụrụ nke KDE SC. A tọhapụrụ Plasma 5.2 na atụmatụ ọhụrụ na ọtụtụ ndozi ahụhụ, nke anyị ga-ekwu maka n'okpuru.
1 Ihe Plasma Ọhụrụ 5.2
2 Oge mgbanwe agafeela
3 Ntinye ntuziaka Plasma 5.2
Ihe Plasma Ọhụrụ 5.2
Lasdị Plasma a na-abịa na ụfọdụ ihe ọhụụ iji mee KDE desktọọpụ zuru ezu:
Bluedevil: ọ ga-enye anyị ohere ijikwa ngwaọrụ Bluetooth. Anyị nwere ike ịhazi oke anyị, keyboard, ma zipụ / nata faịlụ, na mgbakwunye na ịnyagharịa ngwaọrụ ndị dakọtara na teknụzụ a.
KSSHAskPass: Ọ bụrụ na anyị nweta kọmputa ndị ọzọ site na ssh, yana dịka o kwesiri ịbụ ihe ezi uche dị na ya, onye ọrụ nwere paswọọdụ, modulu a ga-enye anyị njirimara ọrụ eserese iji tinye paswọọdụ.
Muon: Site na ngwa ọrụ a (nke ọtụtụ ndị amataworị) anyị ga-enwe ike ịwụnye, jikwaa ngwanrọ na ihe mgbakwunye ndị ọzọ maka kọmputa gị.
Nhazi maka SDDM: SDDM bụ onye njikwa nnweta nhọrọ maka Plasma ugbu a, dochie KDM ochie, yana usoro nhazi sistemụ ọhụrụ a na - enye gị ohere ịhazi isiokwu ahụ.
Ihuenyo: ọ bụ usoro nhazi usoro iji hazie nkwado maka ọtụtụ ndị nlele (lee onyinyo ikpeazụ).
Style maka ngwa GTK: modul ọhụrụ a na - enye gị ohere ịhazi isiokwu nke ngwa Gnome.
Ọrịa- Ọbá akwụkwọ ọhụrụ a na-eme ka ọ dị mfe ịme isiokwu maka KWin ka a tụkwasị ya obi. Ọ nwere nnukwu ebe nchekwa, arụmọrụ na nkwụsi ike ndozi. Y’oburu na ichoro udiri, echegbula onwe ya, o gha abia na Plasma 5.3.
Ọzọkwa, ugbu a, anyị nwere ike ịgbanwe ihe wepụ Widget na Plasma.
KRunner ugbu a, ọ na-esikwu ike ma hazie ahazi ma a bịa n'igosipụta ozi anyị chọrọ, ọbụnakwa na-enye anyị ohere ịchịkwa egwu egwu. Ọzọkwa, ọ na-ugbu a oru iji isi Nchikota Alt + Oghere.
KWIN Ọ bịarutela na isiokwu ọhụrụ nke anyị ahụla na ndabara ma anyị nwere akara ọhụụ na akara ngosi akpọrọ Breeze (Brisa), ọ bụ ezie na m chere na ọ ka na-enwereghị (akara ngosi) ọtụtụ ngwa iji kwado.
Maka ndị ọzọ anyị nwere Wijetị ọhụrụ maka desktọọpụ, menu ngwa ngwa ọzọ (Egwuregwu) ị nwere ike iwunye ngwa site na menu onwe ya ma gbakwunye ọrụ ndozi. Baloo ị ga-enweta njikarịcha ma ugbu a na-eri CPU dị obere karịa na mmalite. Onye nyocha ajuju ajuju nwere oru ohuru iji tulee "type: Audio" na Krunner ma weputa nsonaazụ odiyo.
N'ebe mkpuchi ihuenyo, ejikọtara njikọ na logind iji hụ na emechiri ihuenyo ahụ nke ọma tupu ịkwụsị. Enwere ike ịtọ ntọala ihuenyo. N'ime ọ na-eji akụkụ nke usoro Wayland, nke bụ ọdịnihu nke desktọọpụ Linux.
Enwere mmezi na ijikwa otutu ihe nlere. Nchọpụta nchọpụta maka ọtụtụ ndị nlekota jisiri ike mee ka ha nwee ike iji ndọtị XRandR ozugbo na ọtụtụ nsogbu ndị metụtara ya. Enwere ike ihu ndozi ndị a na ndị ọzọ na Hapụ ndị edeturu.
Oge mgbanwe agafeela
Ma ọ dịkarịa ala na ArchLinux anyị nwere ụfọdụ ngwugwu zuru oke na-akwado KDE 4.14 ochie, Kate, Konsole, bụ ihe atụ abụọ banyere ya. Agbanyeghị maka KDE4 ntọala ntọala ga-edobe ya ~ / .edee /, maka ngwa ọhụrụ ha ga-echekwa na ~ / .config / dị ka Ogba Wiki.
N'oge a ejighi m n'aka ma enwere ike itinye Plasma 5.2 na ArchLinux, agbanyeghị na echere m na ọ nwere ike. E mesịa, anyị ga-ewetara gị ozi gbasara ya na otu esi eme ya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ntinye ntuziaka Plasma 5.2
Naanị m mere ntinye akwụkwọ ntuziaka site na Antergos (na-enweghị eserese eserese) na n'ụzọ bụ isi ihe a bụ ihe ekwesịrị ịwụnye ka ihe niile wee rụọ ọrụ karịa ma ọ bụ karịa:
KMix ka anaghị arụ ọrụ n'agbanyeghị. Nke a bụ ihe ọ dị ka ya:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Plasma 5.2 dị, ka anyị hụ ihe dị ọhụụ [Emelitere]
Anọ m na-agbalị iji nsụgharị ndị gara aga na Archlinux, mana enwere m ọtụtụ nsogbu ma ọ bụ enweghị nkwekọrịta, enwere m olileanya na n'oge na-adịghị anya ọ ga-ekwe omume iji KDE Plasma na mmepụta.
Naanị m wụnye ya na iji Antergos dị ka isi na ọ dị nwute na ọ ka na-adabere n'ọtụtụ ihe si KDE 4.14, dị ka Dolphin. Ọ ka na-enweghị ..
A ga m echere Kde 5 tozuru etozu maka ugbu a Kaos na-eme nke ọma kde 4.14.4
Anke na-agakọ na aga kf5 na ngwụcha ọnwa Febụwarị, na-eche naanị kf5 na plasma 5, ọ ga-akwụsị idobe kde 4.
Ozi di nma n'uzo ...
Maka ụdị ihe a, achọrọ m ArchLinux. Ma ugbu a enwere m obi ụtọ KDE na Fedora.
Ma ị ga-eme nke ọma ịme ya.
Ma ị ga-eme nke ọma ịme ya. Ọzọkwa, ịnwere ike ịwụnye Plasma 5 na Fedora.
Anaghị m ama ihe na-eme ngwa ngwa m. Eji m menu uwa niile kwwada, kate na konsole furu efu. Mgbe ahụ ka m ghọtara ihe kpatara ya. Ugbu a, enwere ihe dọtara uche m na ọ bụ ọkwa nke Andrea Scarpino https://www.archlinux.org/news/transition-of-kde-software-to-the-kde-framework-and-qt-5/ nke ọ na-atụ aro ịgbanwe na nsụgharị Plasma 5.2.
Ọ bụ ezigbo echiche ọ bụ ịtụgharị gaa na Plasma 5.2? Ọ bụrụ otu a, kedụ ụzọ ziri ezi iji mee ya? ma ọ bụ ọ ga-aka mma ịme nhicha dị ọcha?
Tupu oge eruo, ana m ekele gị nke ukwuu.
Enwere m obi abụọ ... ka anyị hụ ma ọ bụrụ na ịmara ihe ...
Ga-KWin standalone arụnyere?
Kedu ihe ga - eme Dolphin na a ga - enwe onye nọchiri anya ya?
Nwere ike wụnye Plasma na-enweghị Badoo?
Ehe, amaghị m nke ọma. Lee okwu m n’elu .. 🙁
Na-ada ụda! Daalụ maka Ama… Slds!
KDE na-enweta ọmarịcha ndabara ugbu a
Fernando Gonzalez ebe obibi oyiyi dijo
Ọmarịcha mma, kwa ụbọchị KDE na-emeziwanye. Na arụmọrụ anaghị ekwupụta ya, ọ dị ezigbo mma, olile anya na ndị Microsoft na Apple anaghị ezu ohi echiche ha na KDE.
Ntọala ndabara KDE kachasị mma m hụtụrụla.
Amaghị m na ọkwa nke arụmọrụ ... mana ọ dọtara uche m na ọ dị ezigbo mma na ndabara, site na mandriva ahụghị m ihe ọ bụla
Aga m anọgide na-eche nkwụsi ike nke kde 5
kde4 bụ desktọọpụ kwụsiri ike nke m ji mee ihe agaghị m agbanwe ya ugbu a
Maka ndị gị na-eji Plasma 5, kedụ maka oke ebule ma e jiri ya tụnyere KDE 4.14?
Ha na-ekwu na oriri agbadaala nke ukwuu. Ana m anwale ya ruo otu izu (nke gara aga, 5.1), achọpụtara m na ọ zara nke ọma, o nyere echiche na ọ dị mmiri karịa KDE4. N'ezie, enwere m ọtụtụ kwin na plasma chrashes, nke ọma, ebe m nwere kọmputa iji rụọ ọrụ, maka otu oge m mere ihe ziri ezi wee laghachi KDE4. M ga-elegharị anya 5.2 ka m hụ otu o si arụ ọrụ. Mana achọpụtara m na ọ ka nwere ntakịrị ike ịdị ka KDE4.
Onye nduhie dijo
Ekwesiri ighota na o jiri ya tụnyere KDE 4.14, plasma 5 na-eripia RAM.
Ọ na-erepịa m ihe dịka 10% nke 4GB, yabụ ọ na-eri nnukwu RAM. Mana n’agbanyeghi nke ahu, Arch m na eme ofuma.
PS: Elav na iwu m chere na ị hapụrụ ngwugwu «plasma», nke gụnyere ngwugwu ndị ọzọ dịkwa mkpa. Ọ dịkarịa ala ụnyaahụ mgbe m wụnye ya, ihe m mere bụ:
sudo pacman -S plasma plasma-meta konsole kdebase-dolphin kate sni-qt breeze-kde4 k3b kdeutils-igbe
Zaghachi Onye Nduhie
Nke a ọ bụ kde 4.14 mature. Aga m eji ya ruo oge 2018 dịkarịa ala. Njọ na-agagharị!
Emere m ihe dị ọcha nke 15.04, enwere m nsogbu onyonyo na kaadị NVIDIA GS7300, ọ kwụsịrị nwụnye, wee nwee ihuenyo ojii. Ekwesịrị m ịwụnye 14.10.
Ihe ọhụrụ kachasị dị mkpa nye ọtụtụ ndị ọrụ anọghị ebe a, mana echegbula onwe m, etinye m ha.
- 150 MB nke RAM NKE oriri (ndị na-eri ihe karịa bụ n'ihi na ha na-ebudata ụlọ akwụkwọ KDE4, lelee)
- Speed ​​na-abawanye na niile accelerated ngwa. Mmetụta dị obi ọjọọ na Chrome; Ọ na-ejegharị 20 ruo 30% ngwa ngwa, n'ụzọ doro anya.
Zaghachi Ernesto Manríquez
Anwaleala m ya ọtụtụ oge, ma enweghị m ike ịnweta ọtụtụ akara ngosi na tray ọbụlagodi ime ihe ha kwuru na ọgbakọ ndị ahụ. Ọ na-eme gị, etinyegoro m ya na mbụ na ọ naghị echekwa nhazi ahụ.
Ọ na-eme mmadụ?
Kedu ndị na-anaghị apụta?
Ihe atụ ụfọdụ, mega, bcloud, igwe ojii mail ru dịka ọmụmaatụ.
Nhazi ahụ echekwabeghị, ọ bụrụ na m pụọ ma banye na ọ dịka ọ dị m ka arụnyere ya ọzọ. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ na nke dị ọcha.
Ọ bụrụ na m na-eji antergos na igwe mebere m nweta akara ngosi niile na tray, wụnye ihe ọ bụla m wụnye, ihe ọ bụla.
Similardị ihe ahụ mere m ụnyaahụ. Ihe m mere bụ ihichapụ faịlụ nhazi niile na ụlọ m. M reboot na voila, ntọala ahụ na-arụ ọrụ. Anwalebeghị m ndị ị kwuru maka ya, mana opekata mpe ọ bụrụ na m nwetara ya. M hapụrụ gị ijide. https://plus.google.com/118419653942662184045/posts/cfPeo35HQ4j
Ka m jiri kaadi NVIDIA GS7300 dozie nsogbu ahụ, ọ naghị azaghachi Plasma 5, jiri ntinye dị ọcha nke 15.04, ọ ka bụ ihuenyo ojii.
Awụnyela m kubutu 15.04 na Plasma 5.3 na n’izu m jiri ya, ọ kụrụ m ọtụtụ oge. Achọpụtala m ụfọdụ nsogbu mgbe m na-arụ ọrụ na ọtụtụ apks na-emeghe, libreofice + amarok + Firefox na-eme ka ị maa jijiji na nkwụsịtụ na windo na-agbanwe.
The software Updater e mechiri m naanị ugboro abụọ.
O tufuola m iberibe chinchi ụdị nke ewepụtara tupu ụdị beta nke Ubuntu.
N'aka nke ọzọ, ana m anụ ihe ụfọdụ na-enweghị isi na Firefox, n'ihi na o nyela m ọtụtụ nsogbu.
Mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka sistemụ m ọ na-emebi n'oge ọ bụla hahaha.
Enwere m ike ịwụnye Plasma 5 na Lubuntu?